IINDABA-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Spain ubuhle Salon Jonga booth akukho: 12-14
Le Autumn, iAstiland iza kuya eSalon Jonga Madrid, eSpain. Booth no: 12-14 Ixesha: 18-20, Oktobha, 2019 Idilesi: Feria de Madrid 28042 Madrid Spain
Impumelelo enkulu evela kwimiboniso yobuhle eMadrid, eSpain
Siyavuya ukubona uninzi lwabathengi bethu abavela eSpain, ePortugal, eBelgium, eRomania, eFrance eMadrid ukusuka ngo-Okthobha ukuya ku-18 kulo nyaka. Kwaye umntu osebenzisana nathi eSpain ancede kakhulu kwisitokhwe nasemva kwenkonzo yentengiso.
Oomatshini abatsha bakhupha i-cryolipolysis koomatshini abakhutshwe e-Astiland babizwa ngokuba yi-AS-CS3 / AS-CS3 +
Owu kumoya oqhubekayo wokuqamba kwiqela le-Astiland RD. Ekupheleni kuka-Matshi ngo-2019, siphucule umatshini wokukhulula amanqatha e-AS-CS3 / AS-CS3 + entlokweni ...
Isatifikethi somatshini wokukhuphela i-FDA i-Thailand.
Ekuqaleni kuka-2019, omnye wabasasazi bethu baseThai bacela ukuba ne-FDA kwimakethi yaseThailand, ngoncedo lweAustriland, ekugqibeleni unesiqinisekiso kwisithuba seenyanga ezimbini. Sivuyisana nathi ...
Iindaba zokuhlaziya umatshini weShockwave
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 2019, iAstiland yenza uphuculo olukhulu ukuba isothuswe ukuqinisekisa ukuba iziphumo ezilandelayo zilungile.
Isaziso somboniso wo-2017
I-2017 China-Korea Ubuhle nelezeMpilo kwishishini elifanelekileyo Umhla: Epreli 21, 2017-Epreli 23, 2017 SHR, HIFU, Cryolipolysis, 808nm Diode Laser, 980nm Diode laser, PD PDT.
Singumthengisi wegolide we-ALIBABA, isiqinisekiso sokurhweba siyafumaneka ngoku!
Kulo nyaka, siye saba ngumthengisi wegolide omtsha kwiwebhusayithi ethi www.alibaba.com. Ndiyathemba ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo ngakumbi kunye neenkonzo ezilungileyo kubathengi abaninzi kwihlabathi liphela. Nantsi iwebhusayithi yethu yase-Alibaba esemthethweni.
ASTILAND eqala umsebenzi
Sivuyiswa kukukwazisa ukuba, sibuyele emsebenzini, kwaye singakunika eyona nkonzo ilungileyo ngoku. Ukuba unawo nawuphi na umbuzo, okanye ulibaziseko ngexesha leholide yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siya kusombulula ngokukhawuleza.